qalisa imoto ngezintambo ze-jumper
Ungayiqala kanjani imoto ngezintambo ze-jumper
1. Nquma ukuthi ngabe udinga ukusebenzisa iikhebula le-jumperngokwesimo. Uma usebenzisa ukhiye wemoto ukubasa futhi imoto inyakazisa kancane, kodwa i-starter motor ayisebenzi, lapho-ke udinga ukusebenzisa ikhebula le-jumper. Kodwa-ke, uma ukuthungela kuzwakala njengomsindo ojwayelekile lapho i-starter motor isebenza, nemishini ye-elektroniki esemotweni, njengamalambu emoto, isengasetshenziswa, kusho ukuthi inkinga ayiveli kubhethri lakho futhi Awudingi usizo lwentambo yokuwela umngcele
2. Zithukulule izintambo zakho zejump uzivule ziqonde. Qaphela ukuthi kuneziqeshana ezimbili ekugcineni ngakunye, okubomvu okukodwa nokumnyama okukodwa.
3. Izimoto zokupaka ezinamabhethri afile eduze kwezimoto ezinogesi. Ibanga phakathi kwalezi zimoto ezimbili alikwazi ukuba likhulu kunobude beikhebula le-jumper. Indlela ekahle kakhulu ukupaka izimoto ezimbili ziqonde ngqo ekhanda. Ngemuva kokupaka imoto, vula ikhava yenjini.
4. Xhuma isiqeshana esibomvu sekhebula le-jumper esigungwini esihle sebhethri elifile. Uphawu "+" luzokwazisa okuyi-terminal evumayo. Uma kunomkhono wokuvikela oplastiki kubhethri elihle lebhethri, lisuse kuqala. Ikhebula le-jumper kufanele lixhunywe kunsimbi enhle yensimbi.
5. Xhuma isiqeshana esibomvu ngakolunye uhlangothi lwentambo ye-jumper kwisiphetho esihle sebhethri. Izinyathelo zokuqapha ziyefana nalezi ezingenhla.
6. Khipha ikhebula le-jumper elimnyama, bese uqala ukuxhuma isiqeshana ekugcineni kwesinye isigxobo esibi sebhethri. Uphawu "-" luzokwazisa okuyisigxobo esibi.
7. Manje yisikhathi esibucayi! Xhuma esinye isiqeshana sekhebula elimnyama engxenyeni yensimbi yenjini, njengebhawodi eliphumayo noma ubakaki wensimbi. Leli phuzu lokuxhuma kufanele libe kude nebhethri ngangokunokwenzeka. Uma ixhunywe ngqo ku-electrode engemihle yebhethri elifile, kungadala ukuthi i-arc idale ukuthi ibhethri liqhume. Ngemuva kokuxhuma enjinini, kungavela ezinye izinhlansi zikagesi. Ungesabi, ngeke uthole amandla kagesi uma ungazithinti izingxenye zensimbi zenjini.
8. Uma konke kuhamba kahle, manje usungayivula imoto. Uma yehluleka ukuqala ngokujwayelekile, sicela ubheke ukuxhumeka kwekhebula futhi.
9. Susa izintambo ngokulandelana okuhlukile, qala ngokususa isiqeshana esimnyama esixhunywe enjinini, bese kuba isiqeshana esimnyama ku-electrode engeyinhle yebhethri. Bese kuba khona isiqeshana esibomvu kwibhethri elihle lebhethri, futhi ekugcineni isiqeshana esibomvu kubhethri elifile. .
Ekugcineni, ngithanda ukukhumbuza bonke abanikazi bezimoto ukuthi ngaphezu kokuqala kabusha ngeikhebula le-jumperlapho ibhethri selifile, ungashayela nenkampani yokudonsa usizo. Isevisi yokudonsa ukuvikela kufanele uthenge njengomshuwalense wemotoï¼Œ ingatakulwa ngezikhathi ezinzima
Yiziphi izinhlelo ezivamile zezintambo ze-coaxial?